China Architectural Woven Mesh ampiasaina amin'ny fananganana orinasa Facade Cladding sy mpamatsy | Boegger
Miambina milina vy manitatra
Harato vy tsy misy fangarony
Volon-kofehy vita amin'ny vy vita amin'ny tanana
Glass misy tariby
kofehy vy coil
rindrina ambain harato
Curtain vita amin'ny vy
Application tontolo iainana
tarehy maitso vy
Fitaovana metaly vita amin'ny vy vita amin'ny metaly
Valin-drihana vy mihombo
Takelaka metaly nitarina
Haingon-trano haingon-trano ho an'ny rindrina ivelany
Metal Coil Drapery ho an'ny Interio Stylish sy azo ampiharina ...
Tady vy mifatotra vy miaraka amina serivisy lava ...
Ny fonon-tànana Chainmail dia mitazona ny tananao ho voaro
Mesh tenona maritrano ampiasaina amin'ny fananganana Cladding Facade
Ny harato metaly haingon-trano dia voaravaka modely tsy manam-paharoa, ary manana tombony azo avy amin'ny fananganana fikojakojana ambany, fahombiazan'ny angovo ary faharetana ara-materialy.
Mesh tenona maritrano miaraka amin'ny endrika tenona sy endrika isan-karazany
Ny harato vita amina mari-trano dia antsoina koa hoe volon'ondry voatenona vita amin'ny harato na harato tariby. Amin'ny ankapobeny, izy io dia azo ahodina ho modely tsy manam-paharoa. Ary ny karazan-tenona sasany dia manao ilay harato tariby voarary toy ny harato tariby marindrano na fehikibo mpampita maritrano. Miaraka amin'ny loko tsara tarehy, lamina maodely, fomba fohy, fiasa tsara, ny harato vita amin'ny maritrano no noraisin'ireo mpamorona sy maritrano marobe ampiasaina ho haingo anatiny sy ivelany. Tahaka ny fizarazarana habakabaka, ny arofanina tohatra, ny rindrina amin'ny tranon'ny birao, ny toeram-pivarotana na ny maritrano manokana hafa.
Wire + tehina haingon-trano.
Tariby vita amin'ny vy toy ny mpizara.
Fitaovana: vy vy, vy vy, varahina, varahina, varahina, aliminioma, firaka aliminioma, sns.
Karazana tenona: manenona tsotra, manenona, manenona dutch, manenona dutch tsotra, manenona dutch, fomba tenona tsy manam-paharoa, sns.
Fitsaboana ety an-tany: nohosorana, namboarina, mifono zinc, sns.
Loko: loko metaly tany am-boalohany na famafazana loko hafa.
Ity harato tariby ity dia azo ampiasaina amin'ny rindranasa marobe amin'ireto manaraka ireto Toetoetra:
Karazan-baravarana sy habe;
Volavola sy endrika tsy manam-paharoa;
Fomba sy fampiasa.
Miaraka amin'ny fiasa marobe sy ny fiangaviana estetika, ny harato tariby tenona dia mety amin'ny fampiharana isan-karazany.
Fampiasana: efitra fizarana, haingon-trano valindrihana, haingon-drindrina, lambam-baravarana, varavarankely, fikoloana lamba, lambam-baravarankely, efijery am-patana, fizarazaran-jiro, fantsom-baravarankely, efijery fitokana-monina, efijery valizy, fivarotana fampirantiana fivarotana, tontonana arabo, tontonana akustika, kabinetra panneaux, facade fananganana, cladding an-tsanganana, tetik'asa asa tanana, sns.
Toerana fangatahana: lavarangana, lalantsara, overpass, ascenseur, hotely, trano fisakafoanana, birao, trano, efitrano fandraisam-bahiny, tranombakoka, efitrano fampisehoana, efitrano fisakafoanana, efitrano fampirantiana, toeram-pivarotana, fidirana amin'ny seranam-piara, teatra sns.
Tariby tenona metaly ho mpizara efitra.
Tariby tenona metaly toy ny rindrina fananganana.
Valin-drakitra haingon-trano valin-drihana.
Harato mafy toy ny endrika fananganana.
Cladding fananganana vy sarotra harato.
Volavola fananganana mesh mafy boribory.
Architecture tenona harato santionany.
Previous: Metal Coil Drapery ho an'ny endrika anatiny sy mahaliana
Manaraka: Conveyor Belt Mesh mety amin'ny fananganana Facade sy Cladding.
Conveyor Belt Mesh mety amin'ny fananganana tarehy ...
Sarimihetsika metaly metaly ho an'ny valindrihana fananganana
Haingon-trano haingon-trano ho an'ny fanamboarana akanjo
Mitaingina vy mitaingina mitazona ny tranobe ...
Metal Coil Drapery ho an'ny lamaody sy azo ampiharina ao ...
Ny lambam-baravarana rohy dia mitazona bibikely manidina hatrany ...
Te hahafantatra fampahalalana bebe kokoa?
Mifandraisa aminay anio haka hevitra.
Address:Faritra indostrialy atsinanana, Anping, Hebei, Sina
Misokatra isika: Mn-Fr: 9: 00 maraina-6: 00 hariva